Yakanakisa Yakagadzirwa Masking Firimu Mugadziri uye Fekitori | Aosheng
Yakagadzirwa masking firimu inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuita kwemota kupenda. Iyi mota pendi yekufukidzira firimu ndeyekusarura chikamu uye yakazara mota muviri kupenda.
✦ Chinyorwa: HDPE plastiki + Masking tepi
Ruvara: Chena, Transparent, Bhuruu…
Kukura: 0.55x33m, 1.4x33m, 1.8x33m, 2.4x20m, 2.7x20m…
Products Zvigadzirwa zvechivanhu uye zvakakurumbira.
Yakagadzirwa masking firimu inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuita kwemota kupenda. Iyi mota pendi yekufukidzira firimu ndeyekusarura chikamu uye yakazara mota muviri kupenda. Izvo zvigadzirwa zvedu zvechinyakare uye zvakakurumbira. Izvo zvinhu i100% HDPE yekuvhara firimu uye yakasungirirwa masking tepi. Yakagadzirwa masking firimu yakawanda-yakapetwa kusvika kumaoko size kuti ive nyore kushandisa.
Iyo masking firimu ine corona kurapwa, iyo inogona kupinza iyo pendi uye kudzivirira kubva kune auto pamusoro pechipiri kusvibiswa. Isu tine matatu marudzi etepi anogona kubatanidza masking firimu: Washi tepi, 80, ramba masking tepi uye 100, ramba masking tepi.
Yakagadzirwa masking firimu inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda zvikamu panguva yekupenda.
Rimwe divi rakanamatira masking firimu iyo inogona kuita kuti pendi yako ishande zvakanyanya.
Details: Yakagadzirwa Masking Firimu
Washi tepi / 80, Masking tepi / 120, Masking tepi
1 roll / shrink bhegi, 50 mabhanzi / bhokisi
Pashure: 3 mu1 Yakagadzirwa Masking Firimu
Zvadaro: Kukura Kukura Splicing Masking Firimu